Biby anankiefatra ( Dan.7 )
Vakio izay voalaza momba ny fahitana ao amin'ny Dan. 7. lnona no votoatin'ny zavatra aseho amin'i Daniela eto, ary momba ny inona ilay fahitana?
Ny biby tsirairay naseho tamin'i Daniela dia mifanaraka amin'ny ampahany amin'ny sariolona naseho tamin'i Nebokadnezara. Misy tsipiriany misimisy kokoa momba ny fanjakana tsirairay avy omena antsika anefa ao amin'ny fahitan'i Daniela. Efa nolazaintsika tamin'ny Sabata fa maloto avokoa ny biby rehetra ao amin'ny fahitan'i Daniela, ho fanehoana fa firenena mpanompo sampy izy ireo. Ankoatra izay, mitovy amin'ny biby efa fantatsika ireo biby telo voalohany. Hafa kosa ny biby fahefatra, ary tsy tahaka ny biby efa fantatsika izany. Maneho ny toetoetry ny fanjakana iray teo amin'ny tantara ny biby tsirairay:
Liona: Famaritana tena sahaza an'i Babilôna ny liona. Nanaingo ny rindrin'ny lapa sy ny asa kanto hafa tany Babilôna tokoa mantsy ny liona manan'elatra. Ao amin'ny fahitan'i Daniela dia nongotana ny elatr'ilay Ilona. Rehefa izay dia najoro mahitsy tahaka ny fijoron'ny olombelona izy, ka nomena fon'olombelona. Maneho ny fikororosy fahan'ny fanjakana Babilônianina teo ambany fanapahan'ireo mpanjakany farany ireo sary an'ohatra ireo.
Bera: Maneho ny ampira medô-persianina ny bera. Hitanao ve fa nisondrotra ny ila-tenan'ilay bera? Milaza izany fa matanjaka kokoa ny Persianina raha oharina amin'ny Medianina. Nisy taolan-tehezana telo koa teo am-bavan'ilay bera, izay maneho ireo fanjakana telo lehibe resin'ny ampira medô-persianina tao anatin'ny ady : Lidia, Babilôna, ary Egipta.
Leoparda: Maneho ny ampira grika najoron'i Aleksandra Lehibe ny leoparda haingam-pandeha. Manana elatra anankiefatra izy, izay maneho fa niakatra teo amin'ny fahefana tamin'ny fomba haingana tokoa i Aleksandra. Tao anatin'ny taona vitsy monja tokoa mantsy dia voafehiny avokoa ny fanjakana rehetra fantatra teto an-tany.
Biby mahatsiravina sady matanjaka: Hitanao ve fa "toy" na "tahaka" ny liona na bera na leoparda ireo biby telo voalohany? Miova izany ankehitriny. Tsy ampitoviana amin-javatra fantatsika ny biby fahefatra izay maneho ny fanjakana fahefatra, ary tsy mitovy amin'ny fanjakana teo alohany rehetra. Manana tandroka maro izy, izay maneho fa lozabe sy mahery setra lavitra noho ireo biby rehetra talohany izy. Famaritana sahaza tsara an'i Roma mpanompo sampy ny toetoetr'io biby fahefatra io. Niady izy ka nandresy sy nifehy ary nanitsakitsaka izao tontolo izao tamin'ny tongony vy.